कस्ता महिलाबाट पुरुष बढी आकर्षित हुन्छन् ? – Bannigadhi Today
एकेन्द्र खत्री २०७७ फागुन १२, बुधबार २०:२१
एक अध्ययनले महिला तथा पुरुषको सेक्स अपिल तथा कामुकतामा वृद्धि गर्ने केही पक्षहरुको खुलासा गरेको छ । वैज्ञानिक आधारसहितका यी तत्वहरुले कामुकतामा वृद्धि गर्ने र विपरित लिंगीलाई बढि आकर्षित गर्ने शोधकर्ताहरुको दाबी छ ।
महिला तथा पुरुष दुबैको कामुकता वा सेक्स अपिलमा वृद्धि गर्ने तरिका ।
१. रातो पहिरन : सेक्स अपिल बढाउने तत्वहरुमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तत्व रातो पहिरन हो । अमेरिकाको रोचेष्टर विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुका अनुसार खासगरी रातो पहिरनमा सजिएका युवतीहरुप्रति तन्नेरीहरु बढि आकर्षित हुन्छन् । रातो पहिरनले महिलाहरुमा कामुकता र सेक्स अपिल बढाएको हुन्छ जुन महिलाहरु स्वयंलाई ज्ञात नहुन सक्छ ।